The Spectacular Now 2013 – Channel Myanmar
IMDB: 7.1/10 141613 votes
ဆက်တာဟာ အရာရာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့။ ကပ်စ်စီလီဆိုတဲ့ သူသိပ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ပြတ်အပြီး တစ်နေ့ အေမီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အေမီဟာ ရည်းစားတောင်မထားဖူးတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ကောင်မလေး။ ဆက်တာဟာ အေမီကို ရည်းစားထားဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်ရည်းစားထားဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်ဆိုပြီး အပျော်တွဲဖို့ ကြံတော့တယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ အေမီဟာ ဆက်တာကို အရမ်းချစ်မိသွားပြီး ဆက်တာသာ သူ့ဘ၀အတွက်အရေးပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့တယ်။ အေမီနဲ့တွဲနေစဉ်မှာလည်း ဆက်တာဟာ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မရှုပ်မရှင်းတွေလုပ်ပေမယ့် အေမီကတော့ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးခဲ့ပြီး သူ ဆက်တာနဲ့တူတူ ထွက်သွားချင်တဲ့ ဖီလီမြို့ကို သွားဖို့သာ အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ တကယ်ထွက်သွားကြမယ့် နေ့မှာတော့ အေမီဟာ ဆက်တာကို ကားဂိတ်မှာစောင့်နေခဲ့ပေမယ့် ဆက်တာဟာ ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး……. အေမီဟာ ဆက်တာမပါဘဲ ဒီအတိုင်းထွက်သွားမှာလား ဆက်တာကရော ပြောင်းလဲလာပါ့မလား…..
File Size : 650 Mb / 350 Mb
Option 1 yoteshinportal.cc 650 Mb 720p
Option2yoteshinportal.cc 300 Mb 480p
Option3usersdrive.com 650 Mb 720p
Option4usersdrive.com 300 Mb 480p
Option5megaup.net 650 Mb 720p
Option6usersdrive.com 300 Mb 480p
Option7upstream.to 650 Mb 720p
Option 8 upstream.to 300 Mb 480p
Brothers’ Nest(2018) 2018
The Cleanse (2016) 2016
Her Blue Sky (2020) 2020
Out of the Dark(1995) 1995
The Gangs, the Oscars, and the Walking Dead(2019)